Iingoma ezilahlekileyo ezivela kuApple Music ziya kubuya kungekudala | IPhone iindaba
Sele iphantse inyanga ukusungulwa kwe-Apple Music kwaye isenazo iingxaki ekufuneka zichaziwe ukuze inkonzo ilunge njengabasebenzisi. Ezi ngxaki zincinci zenza abaninzi bazibuze ukuba I-Apple kufanele ukuba iphehlelele inkonzo yayo kuhlobo lwe-beta de yonke into yenziwa ngakumbi. Kwelinye icala, ndingacinga ukuba kulungile ukuba yayiyi-beta, kodwa ndicinga ukuba iyakuba mbi malunga nentengiso kwaye inokuba sesona sizathu sokuba iApple iyazise ngokusesikweni kuhlobo lokugqibela.
Enye yeengxaki, esele isonjululwe, kukuba abasebenzisi beTunes Match babone iingoma zabo ezithengiweyo ziphinda zikhutshelwe zikhuselwe nge-DRM, ezibathintele ekumameleni kwizixhobo ezingezizo ze-Apple. Enye into ukulahleka okanye ukuphindwa kweengoma, kodwa le ngxaki iya kulungiswa kwixesha elifutshane, sNgokukaJim Dalrymple Loop, oqinisekisa ukuba iApple sele iyayazi ingxaki kwaye iyasebenza kuyo.
Ndicinga ukuba iApple Music kufuneka ihloniphe ilayibrari yethu njengoko siyilungisile. Umzekelo, amazwi eengoma okanye isimbo somculo yinto endifuna ukuyigcina kuzo zonke iindleko ukusukela kwimeko yezitayile, umzekelo, "iMetri" luhlobo olubanzi kakhulu, singasathethi ke "ngeRwala" Apho unokubeka nantoni na. Kwaye kukho iingoma, ezinokuthi zingabalulekanga kakhulu kwabo beva i-pop ngolwimi lwabo lweenkobe, kodwa kuthi abo beva amazwi ekunzima kakhulu ukuwaqonda kwezinye iilwimi, kubaluleke kakhulu ukuba neengoma thinta kude.
Ngapha koko, ngethamsanqa uninzi lolwazi lunokufunyanwa kwiTunes Match, kodwa nokuba kunjalo, iApple kufuneka ilumke ngakumbi ngezi ntlobo zeengxaki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Ingxaki yokuphindaphinda okanye ukulahleka kweengoma ezivela kwiApple Music iya kulungiswa kungekudala
I-iPhone yam ekugqibeleni inecala kwaye le yiyo